မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် လိုင်လင်းပီ - ရေဇွာသွား လမ်းပိုင်းများ ပျက်စီး၍ ဒေသခံပြည်သ? - Yangon Media Group
မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် လိုင်လင်းပီ – ရေဇွာသွား လမ်းပိုင်းများ ပျက်စီး၍ ဒေသခံပြည်သ?
လိုင်လင်းပီ၊ ဇွန် ၁၇
ယခုရက်ပိုင်း မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှု ကြောင့် ချင်းပြည်နယ် လိုင်လင်းပီ မြို့မှ ရေဇွာမြို့သို့ သွားလာသည့် လမ်းပိုင်းများတွင် မြေပြိုမှုများ၊ သစ်ပင်လဲကျမှုများဖြစ်ပွားနေ၍ ပြည်သူများသွားလာရေးအခက် အခဲများကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိ ရသည်။
”အခုလိုမိုးတွေဆက်လက် ရွာသွန်းနေမယ်ဆိုရင် လိုင်လင်းပီ မြို့နဲ့ ရေဇွာမြို့အကြား သွားလာ ရေးမှာ ပိုမိုခက်ခဲနေမှာဖြစ်တယ်။ ရေဇွာမြို့ကို သွားရောက်လစာထုတ်နိုင်ဖို့လည်း ခြေကျင်ခရီးနဲ့ သွားရနိုင်တယ်”ဟု လိုင်လင်းပီမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။ မိုးရွာသွန်းနေမှုကြောင့် ပင်တီယာကျေးရွာနှင့်စပေါ်ကျေးရွာကြား ကိုးထပ်ကွေ့လမ်းပိုင်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုနှင့် မြေပြိုမှုတောက် လျှောက်ဖြစ်ပွားသည်မှာ အဆိုးဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီး ခြေကျင်ခရီးဖြင့် သွားလာရန်ပင် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေသည်။
”အခုထိတော့ သက်ဆိုင်ရာက စက်ကြီးတွေနဲ့လုပ်နေတာတော့ မမြင်မိသေးဘူး။ စက်ကြီးတွေနဲ့ရှင်း မယ်ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံးနှစ် ပတ်လောက်ကြာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်”ဟု စပေါ်ကျေးရွာသို့ ကုန်ပစ္စည်းများသွားရောက်သယ်ဆောင်သူ လိုင်လင်းပီမြို့ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ လမ်းပျက်စီးမှုများကို ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန် ဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာနသည်လည်း လိုင်လင်းပီမြို့တွင် မ ရှိသည့်အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲများရှိနေကြောင်း သိရသည်။
'တစ်ကိုယ်တော် အခွေ ထွက်ဖို့ လုပ်နေရင်း မိသားစုအရေးကြောင့် ဆက်ပြီး မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ အချိန်?
‘ဒေါင်းနီရဲ့ Mood ကို နေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားရတာကြောင့် နေ့တိုင်းပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်’ အိန္ဒြာေ
လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များ ဖမ်းဆီးတော့မည့် သတင်းကြောင့် မြဝတီ၌ ဂျပန်တစ်ပတ်ရစ်ကားများဈေးကျ
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် မုတ္တမတိုက်နယ် ဆေးရုံအတွင်းသို့ ဒုတိယအကြိမ် ရေများ ဝင်ရော